Maamulka biyaha Galkacyo oo hadal macno-darro ah ku tilmaamay waraaqo digniin ah oo la daadiyey. – Radio Daljir
Maamulka biyaha Galkacyo oo hadal macno-darro ah ku tilmaamay waraaqo digniin ah oo la daadiyey.
Galkacyo, June 30 – Maamulka shirkadda biyaha ee magaalada Galkacyo ee GALWA ayaa kuwo aan wax dhimaal lahayn ku tilmaamay waraaqo la sheegay in lagu soo daadiyey xaruntooda kuwaasi oo huwanaa digniino la xiriira shirkaddu in ay joojiso gabi ahaanba biyaha ay magaalada siiso.
Maamulku, waxaa ay tilmaameen waraaqahaasi in ay ahaayeen kuwo been abuur ah oo ay ka danbeeyeen shaqsiyaad leh dano u gaar ah, diidanna hormarka iyo huru-kaca bulshada magaalada Galkacyo kuwaasi marmarsiinyo iyo magac-qaadasho ka dhigtay in ay yihiin Al-shabaab.
Maareeyaha shirkadda biyaha Galkacyo Fu’aad Abshir Xasan oo maanta u warramay idaacadda Daljir ayaa meesha ka saaray qoraallada loogu digayey shirkaddiisa in ay yihiin kuwo sal iyo raadtoona ku leh cidda lagu sumaday, hase ahaatee waxaa uu tilmaamay arrintaasi in ay maleegayaan dad leh damac iyo dano shaqsiyadeed oo kaligood ku kooban.
Maareeyuhu, waxaa uu xaqiijiyey warqadaasi digniinta ahi in aysan waxba u dhimayn hawlihii ballaarnaa ee ay bulshada u hayeen waxna iska baddali doonin hawlihii shirkaddu wadday, waxaana uu intaasi ku daray marna in aysan u hoggaansamayn haddallada noocaan ah cidkasta oo ay ka yimaadaanba.
Md. Fu’aad Abshir Xasan, waxaa uu ku cel-cliyey shirkadda biyuhu in ay tahay noloshii umadda sidaad darteedna dheel-dheel iyo dhalinteed toona aan lagu hor-istaagi karin danaha bulshada, isagoo shacabka magaalada Galkacyo u sheegay in aysan ka walwalin waayitaanka biyaha shirkadda.
Hadalkaan maamulka shirkadda biyaha ee magaalada Galkacyo ayaa yimid kaddib markii maalintii shalay ahayd la daadiyey waraaqo qoraal ah oo loogu digayey shirkadda biyaha Galkacyo, warqadaasi oo muujinayey muddo saddex maalmood gudahooda in lagu joojiyo biyaha magaalada.